Dagaalka Ka Socda Magaalada Darnah Oo Sii Xoogeystay. – Bogga Calamada.com
Dagaalka Ka Socda Magaalada Darnah Oo Sii Xoogeystay.
Wararka ka imaanayo wadanka Liibiya ayaa sheegaya in dagaaladii Magalada Darnah ay wali halkooda kazoo socdaan, furimaha qaarna lagu jabiyey Maleshiyada khaliif xaftar, halka ay iyaguna duqeymo xoogan ka geysanayaan Magaalada.
Xoogaga Difaaca Darnah ayaa shaaciyey inay ka hor tageen weeraro kaga yimid dhanka Maleshiyada Xaftar oo isku dayey inay magaalada kasoo galaan 3da Jiho ee kala ah Galbeed, koofur iyo Bari.
Dagaalo ka dhacay Xaafada Duhrul Axmar oo dhacda koofurta ayaa maleeshyada Looga dilay tiro askar ah waxaana lagaga gubay ilaa laba gaaro oo gaashaaman, halka dhanka Fataix oo dhacda Bariga magaaladana looga gubay mid kamid ah taangiyadii ay kusoo dagal galeen.
Isku geynta gaadiidka dagaal ee maalmihii lasoo dhaafay cadawga laga gubay ayaa gaaraya ilaa lix, waxaana la xaqiijiyey dhimashada 35 kamid ah Maleshiyada Xaftar iyo Dhaawaca 45 kale, sida ay sheegayaan warbaahinada caalamiga ah.
Maleshiyada ayaa la sheegayaa inay dhanka galbeed ee magaalada duqeymo xoogan ka geysteen kuwaas oo sababay khasaare isugu jiro dhimasho iyo burbur hantiyeed oo soo gaaray dadka deegaanka ee ka garab dagaalamaya xoogaga difaaca darnah, ee balanta adag ku galay inay magalada ka difaaci doonan Maleshiyada Ashahaada la dirirka ah.
Dadka deegaanka ayaa soo warinaya in Maleshiyada uu Hogaamiyo Dagaal Ooge Khlif xaftar ee magaalada Go’doonka ku haya mudada 4sano ah ay ku qasbayaan dadka fara kutiriska ah ee doonaya inay magaalada ka baxaan, saxiixida warqad ay ku qoran tahay inaysan Mar danbe kusoo laaban doonin, xili ay duqeymaha sare usii qaadayaan.
Sidoo kale waxaa la sheegaya in magaalada ay kasii dhamaanayan Gaazka la shito iyo Khudaarta iyo cuntooyinka asaasiga ah, maleeshiyadana ay diideen in Magaalada ay soo galaan adeegyo cusub oo kaga yimaada deeganada iyada ka baxsan.